module စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > module စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator
1. ရှဲလ်: Hard လူမီနီယမ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဆန့်ကျင် coated ပြင်ပ epoxy အမှုန့် anodized ။
2. မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-မေးစီးရီး၏တံဆိပ်ခတ်ထားလော့အို-လက်စွပ်အားဖြင့်အားလုံး interfaces IP67 (စံ) ၌၎င်း, IP68 များအတွက်နှစ်ဆဏ-လက်စွပ် (option ကို) ။
3. Handwheel: လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ် actuator torque ပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး, အင်အားစိုက်ထုတ်စစ်ဆင်ရေး။
မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-မေးစီးရီးများအတွက် 4. ကန့်သတ် switches များ
ဖွစျပွီးအပေါ်ကနှစ်ခု screw နှစ်ခုအားဖြင့်ဆွဲထားကြ၏ဖြစ်ပါတယ်, ထို setting ကိုအသီးအသီး cam သီးခြားစီသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်, ရိုးရှင်းပါသည်။
အဆိုပါ setup ကိုပွညျ့စုံ၏ -Once စီ cam အမြဲဒီအနေအထားတွင်ရှိနေပါဦးမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ် 60,000 AOX-မေးစီးရီးတစ်ခုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, ရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းကိရိယာ၏ 300 ကျော်အစုံ, ပစ္စည်းကိရိယာများလူသိများတဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ, မြင့်မားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားအပြောင်းအလဲနဲ့တိကျမှန်ကန်မှုထံမှဝယ်ယူနေကြသည်။
မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ် 2. AOX-မေးစီးရီး Explosive အန္တရာယ်ရှိLocationsâအတွက်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်âတပ်ဆင်ခြင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်။
3. Pay ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းကိုင်တွယ်ရန်အာရုံစိုက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ်သည့် AOX-မေးစီးရီး၏အရည်အသွေးကိုပျက်စီးစေဖို့အတွက် actuator ယန္တရားမော်ဒယ်၏အလေးချိန်နှင့်အညီ load နှင့်ရြဖို့ forklift ကိုအသုံးပြုပါ။
Q: Motor အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-မေးစီးရီးဘို့စတော့ရှယ်ယာရှိပါသလား?
မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-မေးစီးရီးအကြောင်းကိုငွေပေးချေသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာ၏အကြောင်းမေးခွန်းမေး:
hot Tags:: module စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်